Ny lahatsoratr'i Shirley Stark momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Shirley Stark
Shirley Stark miasa amin'izao fotoana izao ao amin'ny InfoCleance amin'ny maha mpitarika ny ekipa marketing. Manana traikefa an-tànana amin'ny varotra B2B izy ary tia manoratra bilaogy, toro-hevitra, mamaky lahatsoratra b2b, Mamorona paikady momba ny fandraharahana ary mandehandeha.
Statistika fampiasana Internet 2021: Tsy matory mihitsy ny angona 8.0
Alatsinainy, Novambra 1, 2021 Alatsinainy, Novambra 1, 2021 Shirley Stark
Ao anatin'ny tontolo mihamitombo ny nomerika, miharatsy amin'ny firongatry ny COVID-19, ireo taona ireo dia nampiditra vanim-potoana vaovao izay ny teknolojia sy ny angon-drakitra dia manana anjara lehibe sy manan-danja amin'ny fiainantsika andavanandro. Ho an'ny mpivarotra na orinasa rehetra any, zavatra iray no azo antoka: tsy isalasalana fa nitombo ny fiantraikan'ny fanjifana angon-drakitra ao amin'ny tontolo nomerika maoderina misy antsika satria ao anatin'ny valan'aretina misy antsika ankehitriny. Eo anelanelan'ny confinement sy ny fanakatonana ny birao,